Atileet Birhaanee Abaabil riikordii addunyaa cabsite |
(BBC Afaan Oromoo) — Atileet Birhaanee Abaabil fiigicha maaraatoonii walakkaa rikoordii addunyaa kan dubartootaa cabsite.
Atileetiin ganna 28 kun dorgommii maaraatoonii walakkaa ‘Ras-al-khaimah’ jedhamu UAE Jimaata ganama fiigame sa’aatii tokko, daqiiqaa afur fi sakandii soddomi tokko figuun rikoordii haaraa galmeessite.
Atileet Birhaaneen riikoordii baatilee 18 dura lammii Keeniyaa Joosiliin Jepkoosgeen qabamee ture sakandiiwwan 20’n dursitee galte.
Fiigicha maaraatooniin rikoordii addunyaa kan harkaa qabdu atileetiin lammii Keenyaa Biriijid Koosgee atileet Birhaaneen sakandiiwwan 18’n durfamtee lammaffaa baateetti.
Dorgommii kana irratti kiiloomeetira jalqaba irraa ka’eeti riikoordiin kan galmaa’e.
Atileetonni lamaaniis fuulduratti baahanii sa’aatii waliin morkii kan eegalan akkuma fiigichi eegaleen ture.
Qaruuraa bishaanii waliif qoodaa, waliin haasa’aa fiigaa kan turan yoo ta’u kiiloomeetira 15 erga fiiganiin booda atileetiin Itoophiyaa Abaabil dursuu kan eegalte.
Qabxiin isheen galmeesiftes jiruu atileetiksii ishee keessatti qabxii isa guddaadha.
Sa’aatiin ishee qaama atileetiksii addunyaa bulchu Federeeshinii Waldaa Atileetiksii Idil-addunyaa ‘IAAF’n raggaasifamee maqaa isheetiin galmaa’a.
Dorgomii dhiironnii fi dubartoonni waliin fiigan kana kan dhiirotaa lammii Keenyaa Kibiwoot Kaandee daqiiqaa 58 fi sakandiiwwan 58’n injifateera.
Ras Al Khaimah Half Marathon 2020 – New Women’s World Record
Ethiopia’s Ababel Yeshaneh smashed the half marathon world record by 20 seconds on Friday to win the Ras Al Khaimah (RAK) event in the United Arab Emirates on Friday. Yeshaneh crossed the finish line in one hour, four minutes and 31 seconds at the World Athletics Gold Label road race, eclipsing the previous record of 1:04:51 set by Kenyan Joyciline Jepkosgei in Valencia in 2017.
Previous articleBuraayyuu keessatti Komaander Solomon Taaddasaa qaamni mootummaatin ajjeefame
Next articleBREAKING_NEWS #ሰበር ሚስጥር ዶ/ር #አብይ አህመድ: Waan Ajaa’ibaa Abiy Ahmed Biyya Arabaatti Raawwate ilaali